Mega Starter Off Grid Solar nwere ngwa mbara igwe niile ịchọrọ ịmalite. Enweghị isi ọwụwa naanị itughari, bido ịwụnye ma nweta ike anyanwụ.
SKU: RE-CK03 Categories: Ngwa zuru ezu, Renewable Energy, Ngwaahịa Ike Mmeghari ohuru Tag: Gbanyụọ Sistemụ Grid
Mega Starter Off Grid Solar System 1.7kW Kit bụ Dị njikere ị ga - ebupute na ịwụnye ma wụnye ụgwọ ụgwọ ike gị n'otu ntabi anya. Wepụ isi ọwụwa site na-eche ụdị akụkụ ịchọrọ inwe yana nke ị na-achọghị. Ihe Mega Starter Off Grid Solar System 1.7kW Kit bụ nkwekọrịta kachasị mma iji bulie dollar gị na ọbụghị Solar ibido mana nweta ike zuru oke iji tụkwasata akụrụngwa gị dị mkpa ike.
6 Anyanwụ nke anụ ahụ nke nwere ihe karịrị 1.7kW nke ike sitere na anyanwụ
1 Inverter nke na-enye ihe karịrị 2kW nke ike
4 Batrị na 6V na-echekwa ihe karịrị 250Ah nke Ike
Ihe Mega Starter Off Grid Solar System 1.7kW Kit bụ maka onye ọ bụla chọrọ ịgbakwunye ike anyanwụ n'ụlọ ha na-enweghị:
Agụmakwụkwọ Agụmakwụkwọ maka Mega Starter Off Grid Solar System 1.7kW Kit
Agụmakwụkwọ akwadoro maka Mega Starter Off Grid Solar System 1.7kW Kit
1 nyochaa maka Mega Starter Off Grid Solar System 1.7kW Kit -6 PV panels
Meag Starter Off Grid Solar System bụ ngwugwu maka unu! Ihe Mega Starter Kit bụ ngwugwu Grid Off nke nwere ihe niile ịchọrọ iji bido Solar n'ụlọ gị. Usoro a nwere ike ịgbanye ọkụ friji gị, TV, Laptọọpụ, bọlbụ LED 15 na ihe ruru 10% karịa.